Saldhig Tareen Xawaare Sare ah | RayHaber | raillynews
06 / 07 / 2017 06 Ankara, 11 Bilecik, 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, HAY'ADAHA, TURKEY, TCDD
Dhismaha Saldhig Bilecik High Speed ​​Train Station, oo ka kooban qiyaasaha A, B iyo C, 3 blocks, ayaa loo xilsaaray 01 June 2015.
A Block-ka, waxaa jira adeegga rakaabka iyo VIP, halka Block B, waxaa jira hoolka sugitaanka ee rakaabka halkaas oo nidaamyada kontoroolka tigidhka la sameeyo. Rakaabka qolka sugitaanka waa habka ugu dheer truss sameeyey oo mitir 73 steel oo dherer ah la furitaanka hal Turkey.
Block C wuxuu ka kooban yahay wiishka iyo kor uqaadayaasha.
Bilecik YHT Station wuxuu leeyahay awood u adeegga kunka rakaab ah maalintii. Waxaa jira 44.000 khadadka muhiimka ah, 2 iyo 2 khadadka caadiga ah. Waxaa jira laba goobood oo 1 m dherer ah.
5.342 M2 ayaa xiran iyo qiyaastii 30.000 M2 wareeg ah oo bannaan oo furan, dhismaha boosteejada wuxuu leeyahay meel baabuurta la dhigto oo loogu talagalay rakaabka.
Waxaa jira jajab, wiishashyo iyo maareyn waxyaabo macquul ah oo lagu daboolo dhismaha iyo saldhigga, taas oo loo habeeyay iyadoo loo eegayo helitaanka rakaabyada jidhka naafada ah.
Bozuyuk YHT Station ayaa la furay July 24 iyadoo la furayo furitaanka tareenka Eskişehir-Istanbul.
5.000 M2 Bozüyük YHT Station, oo ah aag xiran, wuxuu ka kooban yahay labo dhisme afar dabaq ah iyo buundad isku xirta dhismooyinka tareenka.
Saldhigga, oo loogu talagalay inuu u adeego rakaabka dayuuradaha 5.000, wuxuu leeyahay xarumaha 2 iyo xarumaha 5.
Turkey ayaa High Speed ​​Tareen Station ugu horeysay la Polatli YHT Station, waxaa la furay on February 16 2010.
5.500 Station Building oo leh park baabuur furan oo leh cabbirka gaari m2 iyo 100; 3 kacdoonayaasha, 3 wiqiyeyaasha iyo nidaamyada kuleylinta iyo qaboojinta gaarka ah ayaa lagu dhisay qaab casri ah oo casri ah.
Meelaha Polatli YHT Station Building, halkaas oo granite loo isticmaalo saqafyada iyo saqafka la xiro ee saqafka, waxaa lagu daboolaa granite iyo miraha wax lagu sawirayo, iyo rinjir kulul oo lagu sameeyo farsamada rakibaadda.
1.200 M2 aagga dhismaha, 2 mashiinka rakaabka, Xarunta Tareenka ee Polatlı YHT mustaqbalka tixgelinaya kororka wareegga wareegga 3. Qorshaha lagama maarmaanka ah ayaa loo sameeyey mashiinka. Waxaa jira Xirmooyinka 1 iyo 1 kor u qaadayaasha kuwaas oo siinaya fursad kasta oo loox ah.
Isku-celceliska maalinlaha ee 750 iyo 1.000 waxay u safrayaan Station-ka Polatli YHT; Waxaa jira qolka sugitaanka 1, xafiiska sanduuqa 4, maqaaxiyaha 1, dukaamada 2, Masjid iyo xarumaha 25 ee waaxyaha maamulka iyo farsamada, iyo sidoo kale musqulo gaar ah iyo wiisharro loogu talagalay dadka waayeelka ah iyo kuwa naafada ah.
ANKARA GARGAARKA GARGAARKA GAR
Mashruuca TCDD ee Mashruuca ugu horeeya dhismaha iyo hawl-qabadka
Capital uu leeyahay Xoolo ah mashaariicda naqshad in dari doonaa qaninimada Ankara High Speed ​​Rail Station, State Tareennada ee Jamhuuriyadda Turkiga ayaa markii ugu horeysay model Samee-shaqeeyaan-Transfer lagu dhisay.
Dhismaha saldhigga cusub ayaa la dhisay iyada oo aan la taaban karin xarunta joogtada ah ee Ankara, oo leh meel muhiim ah taariikhdeena, heesaha dadweynaha iyo gabayada iyo xusuusta.
sharafta Author ee Turkey iyo Ankara
Waxaa loogu talagalay inay metesho xawaaraha iyo firfircoonida iyadoo la raacayo aragtida cusub ee TCDD, shaqadu waxay ka tarjumaysaa fahamka maskaxda ee maanta.
Naqshadaha Dhismaha iyo xarumaha bulshada iyo Ankara kula Turkey ee sharafta ay meel ka mid ah taxadiri caasimadda YHT Station qaadan doonaa, BAŞKENTRAY la dhisay in ay xidhiidh la Ankaray iyo Keçiören hoostiisa.
50 waxay u adeegi doontaa kun rakaab ah
Ankara YHT Station waxay awoodi doontaa inay u adeegto illaa 1000 rakaab ah maalin kasta.
Mashruucu wuxuu ka kooban yahay 12 M3 aagga la xiray iyo wadarta 6 dabaqyada oo ay ku jiraan dabaqyada dhulka, oo leh xNUMX iyo 194.460 tareenka halkaasoo 2 YHT ay isku xiran karaan isla markaa.
Wadnaha caasimadda ayaa garaacaya Ankara YHT Station
Marka laga soo tago qeybaha adeegga gaadiidka, gawaarida gawaarida wadarta wadarta 1.910 waxaa lagu bixin doonaa Xarunta YHT Ankara; goobaha ganacsiga, makhaayadaha-makhaayadaha, xafiisyada ganacsiga iyo hoolalka ujeedada badan, Masjidka, gargaarka degdegga ah iyo unugyada amniga iyo goobaha bulshada iyo dhaqanka sida hudheelada.
Inkastoo dhammaan rakaabkeenu helayaan fursado safar oo raaxo leh, nolosha bulshada iyo nolosha dhaqanka ee magaalada ayaa ku kulma xarunta YHT ee Ankara.
YHT Station, oo la qorsheynayo in la daboolo dhammaan baahida dadka naafada ah ee isticmaalaya tiknoolajiyadda ugu dambeysa, ayaa noqda xarunta xarumaha soo jiidashada.
TCDD si ay u shaqeyso tareeno
Ankara YHT Station, oo laga dhisay Sanad 2 oo ay maamusho Station Tareen (ATG) oo loogu talagalay bisha 19 sanadka 7, waxaa loo wareejin doonaa TCDD dhamaadka muddadan. Saldhigga tareenka ee saldhigga cusub wuxuu maamuli doonaa TCDD.
Kalidaa Waddanka Dalka
Ku dhawaaqida qandaraaska: Arimaha hada ka socda Osmaniye iyo inskenderun Train Station lar
Pianist Tuluyhan wuxuu sheegayaa sheekada 200 sano ee saldhigga taariikheed ee Uğurlu Sirkeci Station.
Xarunta Tareenka ee Ankara
saldhigyada tareenka ee degdega